सावधान! देखिन थाल्यो कोरोनाको अर्को खतरनाक लक्षण, यसो भन्छन बिज्ञ — Sanchar Kendra
१ओली सरकारले गर्यो फेरि जनता रुवाउने यस्तो निर्णय, राति १२ बजेबाट लागु हुने
२प्रचण्डले ओलीलाई भेडा भनेपछि…
३ओलीको अस्ताउँदो सूर्य हो, उदाउँदो सूर्य चिन्ह त हाम्रो हो- माधव नेपाल
४ओली-प्रचण्ड समूहका कार्यकर्ताबीच कुटा-कुट, वडाध्यक्ष घाइते
५नेपालमा ३ जनामा देखियो नयाँ प्रकारको कोरोना
६विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्यो लोडसेडिङको तालिका
७प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्को रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू
८आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोवार
९टेलिभिजनमा बाेल्दा बोल्दै प्रस्तोताको दांत खुस्कियाे, हेर्नुहाेस भाइरल बनेकाे भिडियाेसहित
१०भारतमा कोरोना खोप लगाएका बिरामीमा देखिन थाल्यो यस्ताे गम्भीर साइड इफेक्ट, अब के गर्लान मोदी ?
११बिलबाओलाई स्पेनी सुपरकप, मेसीलाई रातो कार्ड
१२सोलुखुम्बुमा टिपर दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु
१०आफुबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री राईले दिए यस्तो अनौठो प्रतिक्रिया
११ओलीले संसद विघटन गरेपछि बैद्यले के भने ? हेर्नुहोस वक्तव्यसहित
१२प्रचण्ड-नेपाल समुहले प्रदेश इन्चार्जबाट पोखरेल र गुरुङलाई हटायो
सावधान! देखिन थाल्यो कोरोनाको अर्को खतरनाक लक्षण, यसो भन्छन बिज्ञ
एजेन्सी । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाको खास लक्षण ठ्याक्क यही हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । मानिसमा अनेक लक्षणहरु देखापर्ने गरेको पाइन्छ । अधिकांश संक्रमितहरु त लक्षणविहीन नै छन् ।
यो अवस्थामा हालै बेलायतमा गरिएको एक अनुसन्धानले डायरीया, उल्टी र पेट दुख्ने लक्षण देखिएमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । विशेष गरी यी लक्षणहरु बालबालिकामा बढी देखिने अध्ययनले बताएको छ ।
क्विन्स युनिभर्सिटीको बेलफास्ट टिमले गरेको अनुसन्धानले बालबालिकालाई डायरिया हुने, उल्टी हुने र पेट बटारिने लक्षण देखिएमा कोरोना संक्रमण भएको हुनसक्ने बताएको हो ।
यस अनुसन्धानका लागि एक हजार बालबालिकालाई समावेश गरिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ । मेडआरकाइभमा प्रकाशित यस अनुसन्धानका अनुसार ९९२ बालबालिका मध्ये ६८ जनामा एन्टीबडी पाइएको थियो । ६८ मध्ये १३ बालबालिकाले डायरीया, उल्टीम पेट दुख्ने सिकायत गरेका थिए ।
६८ मध्ये २१ बालबालिकामा ज्वरो आउने समान लक्षण पाइएको थियो । यस अध्ययनमा समावेश गरिएका बालबालिकालाई अस्पताल भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था भने नदेखिएको उल्लेख छ ।
यस अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका अनुसन्धानकर्ता डाक्टर टम वाटरफिल्डले भने, ‘हामीलाई थाहा थियो, संक्रमित धरै जसो बालबालिकाको अवस्था राम्रो नै थियो । तर हामीलाई थाहा छैन यी संक्रमित बच्चाबाट कति धेरै संक्रमण फैलियो ।’
उनले संक्रमित केहि बच्चामा डायरीया, उल्टी र पेट दुख्ने लक्षण देखिएकाले यसलाई कोरोनाको लक्षणमा समावेश गर्न पर्याप्त भएको बताए । बेलायतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस अनुसन्धानको सुझावलाई अध्ययन गरिरहेको र कोरोनाको लक्षणमा समावेश गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएको छ ।
अहिले बेलायतमा मुख्यरुपमा खोकी, ज्वरो, गन्ध वा स्वाद थाहा नपाउनेलाई कोरोनाको लक्षणको रुपमा मानिदै आएको छ । अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलले यस अघि नै यस किसिमको लक्षणलाई कोरोनाको लक्षणमा समावेश गरिसकेको छ । स्रोत- बीबीसी
यस्तै रुसले बनाएको कोरोना भाइरसविरूद्धको खोपको विश्वसनियता बढेको छ । रूसी वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको परीक्षणबाट मानिसमा भाइरसविरुद्ध लड्ने प्रणालीको विकास भएको जनाएका छन्।
मेडिकल जर्नल द लान्सेटमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा खोप परीक्षणमा सहभागी सबैमा भाइरसविरुद्ध लड्ने प्रतिरोधात्मक प्रणालीको विकास भएको र कुनै गम्भीर साइड इफेक्ट नभएको दाबी गरिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
खोपको वैज्ञानिक नतिजा नआइ अगस्ट महिनामा नै स्थानीय रूपमा उक्त खोप प्रयोग गर्न दिएको रूसको उक्त खोपले काम गर्नेमा आशंका गरिएको थियो ।
तर, यो परिणामले उक्त खोपको विश्वसनियता केही हदसम्म बढाए पनि अझै पनि यसको प्रभावकारिता र सुरक्षित रहेको प्रमाणित गर्न भने अझै अरू परीक्षण जरूरी रहेको बताइएको छ ।
गत महिना राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आवश्यक सबै परीक्षणका मापदण्ड खोपले पूरा गरेको र आफ्नी छोरीमा पनि परीक्षण गरिएको बताएका थिए। स्पुत्निक पाँच नाम दिइएको उक्त खोपको दुईवटा परीक्षण गत जुन र जुलाई महिनामा गरिएको जनाइएको छ ।
भारतमा कोरोना खोप लगाएका बिरामीमा देखिन थाल्यो यस्ताे गम्भीर साइड इफेक्ट, अब के गर्लान मोदी ?
बितेको २४ घण्टामा ५ लाख संक्रमित थपिए, ९ हजार बढीकाे मृत्यु
नयाँ प्रकारको कोरोनाले २०२१ झन् कठिन हुने डब्ल्युएचओको चेतावनी
भारतमा कोरोना खोप लगाएका ५२ जनाको स्वास्थ्य झन् बिग्रियो, केहिको अवस्था गम्भीर
फेरि गयो ६.२ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प, अहिलेसम्म ३४ जनाको मृत्यु, कहाँ हो केन्द्रविन्दु ?